Global Voices teny Malagasy » Tajikistan: Natiora Mangatsakatsaka sy Akon’ny Tantara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Mey 2015 2:45 GMT 1	 · Mpanoratra Abdulfattoh Shafiev Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Tajikistan, Hevitra, Mediam-bahoaka, Saripika, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Ny Lalambe Handehanana haingana ao Pamir dia tafiditra fahatelo amin'ireo folo voalohany tsara tsidihana ho an'ireo toerana tany amin'ny Firaisana Sovietika taloha nandritra ny fampilaharana nivoaka tamin'ny Mey 2015 avy amin'ny National Geographic Traveler  ary heverin'ny maro ho iray amin'ny lalana mampientam-po sy mampivadim-po indrindra manerantany.
Koa satria ny jeep mamakivaky ny lalana mampitohy an'i Dushanbe sy Murghab  any atsinanana, dia mety ho hitan'ny mpandeha amin'ny lalambe ny tanànakely Afghan maro manamorona ny reniranon'i Amu-Darya. Misaraka amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha amin'ny alalan'ny rano miolikolika aoka izany; dia tahaka ny tontolo hafa mihitsy ry zareo.
Any amin'ny toerana sasany eny an-dalana ianao mety hahatsikaritra ny Tendron'i Ismoil Somoni , tendro fahatelo avo indrindra tao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha. Mety te-hivavaka eo amin'ny tempoly Zoroastriana  iray fahagola ianao ary hamaky petroglyphs. Any amin'ny fahatongavana ao Murghab ny mpizaha tany no mety hiletra yak [karazan'omby bevolo sy bevozona] avy amin'ny mpiompy amin'ny foko Kyrgyz amin'ny ankapobeny.
Dushanbe ihany koa dia azo ampiasainaho toby fiaingana mankany amin'ny tanàna faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena — Khujand  — hanaovana fitsangatsanganana iray hafa lavitr'ezaka ihany koa, ary amin'ity kosa dia mamakivaky ny Tangoron-tendrombohitra Fan  any avaratra sy andrefan'ny firenena.
Any amin'ny lohasahan'i Zarafshan manaraka iny lalana iny no ahitana ny sasantsasany amin'ny farihy mahafinaritra indrindra ao Azia afovoany. Iskandarkul , misy ifandraisany amin'ny anarana sy ny anganon'i Alexander ilay Lehibe, dia miorina any amin'ny 2195 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina. Avy amin'ny zoro ankavanana ianao no mety hahita ny farihy ho fitaratry ny natiora manodidina azy, mitaratra ny tendron'ireo tangorombohitra mahasondriana an'i Fan ao anaty fahadiovana mahasarika. Manaraka izany ihany koa ny tontolo hafa mihitsy misy ny farihy fiton'i Shing , antsoina indraindray hoe printsesy Shing.
Mino ny Tajika fa ny anganon'ny tantaran'ny tanànan'i Bukhara  sy Samarkand  dia azy ireo ara-kolontsaina, saingy nomena an'i Uzbekistan ireo tany lonaka ankebekebaky ny tany ngazana anatin'ny Lalan'ny Lasoà ireo rehefa nanoritsoritra ho repoblika sovietika tsy ampy fahalalàna ny mari-panondroam-pirenen'ireo mponina ao an-toerana ny Bôlsevika.
Saingy na tsy manana ireo perla fahagolan'i Azia, araka ny iantsoana azy ireo tsindraindray aza i Tajikistan dia manana toerana manatantara. Mandan'i Hisor , 20 kilometatra monja avy amin'ny renivohitra manarana ny lalambe vao naorina vao haingana avy ao Dushanbe no fanorenana tokana fahagola mampahatsiahy ny Fanjakana Shuman, izay mankalaza ny tsingerintaona faha-3000 amin'ity taona ity.
Amin'ny tantara any avaratra, dia azonao tsidihana ihany koa ny moskea Sheikh Muslihiddin  any Khujand sy ny tanànan'i Istaravshan  naorin'i Alexander ilay Lehibe izay nomena anarana teo aloha ho Alexandria. Ny atsimo kosa amin'izany fotoana izny dia manana ny Monasitera Bodista Ajina-Tepe  izay namoahana avy any anaty tany tamin'ny taona 1966 tsangambaton'i Buddha  lehibe indrindra ao Azia Afovoany. Nohavaozina nanomboka teo amin'ny valahana no miakatra, miorina ao amin'ny Mozeam-Pirenen'ny Antikiten'i Tajikistan ao Dushanbe izy io amin'izao fotoana izao.
Ankoatra ny famerenana amin'ny ampahany ireo Buddha, dia ahitana zavatra maro  ihany koa ao Dushanbe  ka anisan'izany ny andrin-tsaina faharoa avo indrindra manerantany. Ankoatra izany, raha mitsidika fanindroany indray ny firenena ianao ao anatin'ny roa taona, dia hahita ny moskea lehibe indrindra ao Azia Afovoany ankoatra ny efitrano fanaovana tantara tsangana lehibe idrindra ao amin'ny faritra.
Koa aoka tsy hampihemotra anao ny fandaharana ny firenena ho faha-109  amin'ny firenena 141 amin'ny sehatry ny Fandehanana Lavitra sy ny Fizahantany nokarakarain'ny World Economic Forum. Mitsangatsangàna any Tajikistan!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/05/08/70001/
 Tendron'i Ismoil Somoni: http://en.wikipedia.org/wiki/Ismoil_Somoni_Peak
 Tangoron-tendrombohitra Fan: http://en.wikipedia.org/wiki/Fann_Mountains
 farihy fiton'i Shing: http://tdc.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=32&lang
 Mandan'i Hisor: http://en.wikipedia.org/wiki/Hisor
 moskea Sheikh Muslihiddin: http://tdc.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=31:2010-02-24-13-19-08&catid=7:2010-03-01-05-23-50&Itemid=25&lang=en
 Monasitera Bodista Ajina-Tepe: http://www.advantour.com/tajikistan/kurgan-tube/ajina-tepe.htm
 tsangambaton'i Buddha: https://www.youtube.com/watch?v=HYU3GQcVqqA&feature=relmfu
 zavatra maro: https://globalvoicesonline.org/2012/04/11/tajikistan-where-size-matters/